आफ्नो छोरा छोरीकै सामु श.रीर सुम्पिन बाध्य भएकी यी महिलाको कथा, धादिङ्गमा टिप्पर भित्र यस्तो सम्म भयो ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 3, 2021 AdminLeaveaComment on आफ्नो छोरा छोरीकै सामु श.रीर सुम्पिन बाध्य भएकी यी महिलाको कथा, धादिङ्गमा टिप्पर भित्र यस्तो सम्म भयो ! हेर्नुहोस (भिडियो सहित)
कोरोना कहरसंगै लाखौले काठमाडौँ उपत्यका छोडे । त्यस्तै एक महिला टिपर चढेर आफ्नो घर जान लागेकी थिइन् । उनीसंग साना दुई छोराछोरी थिए । वाहिर ठूलो पानी परेको थियो । टिपर भित्र साना छोराछोरी मस्त निदाएका थिए । विहान पख उनको जिवनमा जे भयो त्यसपछि उनी उजाडिइन् । विहान पख उनी निदाउनै थालेकी थिइन् ।
उनको शरिरमा टिपर मालिकले कु.कर्म गरे । उनले आफु माथि भएको त्यो घ’टनाको बारेमा आफ्नो श्रीमानलाई बताइन् । उनले श्रीमानलाई आफु माथि घ’टेको त्यो कुरा रुँ’दै सुनाइन् । उनले अब आफु श्रीमानको लायक भइन म के गरुँ भन्दै रुँ’दा उनको श्रीमानले साथ दिए । उनले श्रीमतीलाई लिएर प्रहरी कार्यालय गइन् ।
दुई छोराछोरीको ज्यान को बदला तेरो श.रिर चाहियो भनेर टिपर मालिकले ध म्की दिए । उनी छोराछोरीको ज्यान जोगाउन आफ्नो श.रिर सुम्पिइन् । यो बाध्यतामा परेकी श्रीमतीलाई साथ दिएर न्याय खोज्न हिँडेका यि जोडीले अहिले सम्म न्याय पाएका छैनन् । त्यसरी साना छोराछोरीकै अगाडी आमाको अ.स्मिता लिने टिपर मालिलाई का.रवाही हुन सकेको छैन ।
उनीहरुकै अघि उनी छाती फुलाएर समाजमा हिडेका छन् । अन्या’यमा परेका यि जोडी भने मन खुम्च्याएर बसेका छन् । उनीहरु १० वर्ष देखि काठमाडौमा बस्थे । कोरोनाका कारण लकडाउन हुने अवस्थामा उनीहरु घर फर्कने निर्णय गरे । खेतीपाती बाँझै भएका कारण खेती लगाउन भन्दै उनी टिपरमा छोराछोरी लिएर घर जान हिडेकी थिइन् । कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले अन्य बस र यातायातका साधन चलेका थिएनन् ।
त्यसैले उनी टिपरमा जाने निर्णय गरिन् । तर उनको त्यो टिपर यात्रा जीवन कै अध्यारो यात्रा हुन पुग्यो । अहिले सम्म पनि न्याय नपाएपछि पि’डित महिला मिडियामा आफ्नो गुनासो राख्न आएका छन । घ’टनाको बेलि बिस्तार सुनाउदै न्यायको आशामा उनि मिडियामा यसरी आफ्नो पिडा सुनाउछिन । पिडित महिलासंग गरिएको कुराकानी यहाबाट हेर्नुहोसः
गोंगबुमा आफ्नै श्रीमानको टु’क्रा टु’क्रा गरि ह’त्या गर्ने कल्पना मुडभारीलाई आजीवन का’रावासको स’जाय….
हुबहु नायिका स्वस्तिमा खड्का जस्तै देखिने युवती टिकटकमा भाइ,रल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)….